Canshuur celintii oo dalkaan si dhakhso ah uga bilaabaneysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Canshuur celintii oo dalkaan si dhakhso ah uga bilaabaneysa
La daabacay tisdag 4 april kl 15.47
Heeyada canshuurta ee Skatteverket. sawir: CHRISTINE OLSSON / TT
Hey’adda canshuuraha dalkaan Sweden ayaa sheegtey in dad gaaraya 555 485 oo qof ay ilaa hadda heleen waraaqahooda canshuur celinta ah ee sanadlaha ah.
Usbuucaan gudihiisa ayaa waxaa bilaaban doona dib u bixinta lacagahaas, waana markii ugu horeysey ee dib u bixinta lacagahaas la bilaabo xilliyadaan taas oo wax badan ka horeysa xilliyadii markii hore lacagahaas caadi ahaan la bixin jirey.
Eva Boden oo ka hawlgasha hey’adda canshuuraha dalkaan ayaa iyadoo arrinkaas ka hadleysa waxay tiri:
-Si qofka lacagtaas waqti hore loogu soo celiyo waxaa khasab ah in qofku isagoo aan waxba ka badalin warbixinaha waraaqahaas canshuur celinta ku qoran uu dib hey’adda ugu diro ka hor inta aan la gaarin bisha maarso 29-keeda, isagoo isticmaalaya aaladda internet-ka, ayey tiri Eva Boden oo ka hawlgasha hey’adda canshuuraha dalkaan Sweden.
Lacagaha ay hey’adda canshuuraha dalkaani dib dadweynaha ugu celineyso sanadkaan ayaa dhan afar milyaarder oo karoon.
Qaar ka mid ah dadkii waraaqahaas canshuurta buuxiyey ka hor 29 bishii maarso, waxna aan ka badalin ayaa lacagaha dib ugu soo noqonaya waxay heli doonaan marka taariikhdu tahay 5-ta iyo 7-da bishaan april ee lagu jiro.